Gini mere eji eme ihe eji eme ka ndi Africa na ndi American-Americans mgbe niile dika adighi mgbe obula? - AFRIKHEPRI
Gịnị mere African na African-America ji "emebi dị ka mgbe"?
JEdobere m edemede a na Vieux Boukoul, otu n'ime ndị ndu Kongolese sapology. O nwere nka na uzo eji eji ejiji. Mara mma mgbe niile, mara mma mgbe niile, na-adị ọcha mgbe niile, na-adị ọcha mgbe niile. Obi m jupụtara na nwute n’ihi na agadi nwoke ahụ apụọla, ikekwe ọ dị obere n’oge. Ma ọdịnala “nwụrụ anwụ anwụghị”. Ọzọkwa, ọ dị m ka ya laghachite azụ. Ka ọrụ ebube ya kpalie ọgbọ ọhụrụ nke ndị ọbụ abụ Kongolese. Kendé na kimia Papa.
Ikwu banyere Africa, ikwu okwu banyere omenala Afrika, bu ikwu okwu banyere ime mmuo. Ekwesiri ikwu okwu banyere ihe gbasara Afrika na-eziga anyi na NZAMBI (CHINEKE) n'ihi na nna nna anyi nile, ihe nile, bu ihe gbasara NZAMBI.
M na-akpọ gị òkù ịlaghachi azụ na oge ọdịnala Afrika iji gbalịa ịghọta ihe mere nna nna anyị ji dị oke mkpa ịdị mma na ụdị, na ihe mere anyị, ụmụ ha, ji aga n'ihu.
I.Travel n'oge gara aga
Ọ bụ ihe nzuzo ndị Afrika na ndị Africa-America na-achọ ka eji akwa akwa, na ha nwere mmasị ịke na ịdị mma. Onye nwere ike iche na ha nwere ihe onwunwe, ma ọ bụ na ha nwere mmasị dị ukwuu n'ọdịdị; ma ọ bụghị otú ahụ.
N'eziokwu, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịghọta ihe mere na Africa na African-Americans amasị nke ukwuu na-eji ejiji na-enye ọtụtụ nke dị mkpa na nghọta, na mmebi, ị na-ele anya na nke African ime mmụọ omenala . Ma tupu ị na-ekwu banyere ihe ime mmụọ, ka anyị na-eme njem ma laghachi n'oge.
Enwere akụkọ ihe mere eme n'oge gara aga na ndị Africa na-adịcha mma ma dị mma? Na ajụjụ a, ana m aza ya n'eziokwu.
Ndị mbụ na-eme nchọpụta nke Europe bụ ndị rutere n'Africa site na 14th century na-enye anyị ozi dị mkpa banyere ịdị mma nke ndị Africa oge ochie:
"Mgbe (European ụgbọ mmiri) rutere Bay of Guinea wee kwụsị na Vaida, na-echeta German ethnologist Leo Frobenius, ndi-isi tụrụ ha n'anya ịhụ ọma họpụtara n'okporo ámá na a ogologo nke ọtụtụ leagues site ahịrị abụọ nke osisi: ha gafere n'oge ogologo oge mgbasa ozi kpuchiri ebe mara mma, ndị bi na ya ndị ikom yi uwe na-egbuke egbuke bụ ndị ákwà ha yi ákwà ! N'ebe ndịda, n'Alaeze Congo, ìgwè mmadụ na-eyi uwe silk na velvetiwu buru ibu, nke a kapịrị ọnụ nke ọma, nchịkọta oge, ndị ọchịchị dị ike, ọrụ ndị na-arụ ọrụ ego. Ghabara onwe ya n'ọkpụkpụ ọkpụkpụ! Na ihe ndi ozo dika onodu nke mba ndi bi n'ugwu anyanwu, Mozambique. "(Lee History of African Civilization)
Ndị Afrika na-eji "akwa ejiji", Kongolais eji akwa silk na velvet ... na XNIXXth century. Ya mere, ebe a ka e si nweta akwụkwọ akụkọ ahụ?
Solange na Sapologues
Stroma na Sapologues
Ọ ga-ekwe omume na ndị Sapologues abughi na-agbanyeghachi, ike na njirimara ha, àgwà ochie nke Afrika. Echere m otú ahụ, ee.
The Bokoko (nkà na ndụ nke African okenye) na-akụzi na n 'ọ dịghị ihe ọhụrụ, n'ihi na nwoke na-adịghị dịrị, ọ na-echeta. Ihe di iche n'etiti egwu Afrika na Afrika na egwurugwu Afrika na egosiputa na ndi Afro-America adighi emeputa ha, ha na-amughari omumu, gbanwee ma gbanwee, nke di ugbua n'egwurugwu Afrika. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịmee nchọpụta, ị ga-ahụ nhata nke twerk, "ịgba egwu?", nke gụnyere ịmalite ntụrụndụ ya na ọdịdị egwuregwu, na ọdịnala Afrika.
"Ndi Afrika amaghi ihe site n'ile anya n'ahu onwe ha; ha na-amụta site n'icheta ihe ọmụma ha nwere"Ka Malidoma Somé, onye nkụzi ime mmụọ Africa, dere n'akwụkwọ ya Amamihe Africa.
Ka anyị gaa n'ihu njem anyị n'oge gara aga na ndị Dutch Dutchistist Olfet Dapper (1636-1689).
Na ọrụ ya Nkọwa nke Afrika, ndị nke ikpeazụ dere, sị:
"Na aborea nso Volta, madu nile n'etiti Negroes bụ a owu ákwà uwe ... na ndị inyom na-eyi a uwe mere fọrọ nke nta ka mmadụ (...) Na Monomotapa, eze anaghị agbanwe na ejiji, ha na-eyi akwa ákwà akwa silk na mba ahụ; ha na-ejikarị eriri na-ekpuchi ya (...) Ndị nkịtị na-eyiri akwa ákwà na nnukwu, India na-eji ọlaedo (...) Ndị bi n'alaeze Guinea gbanwere ihe osise ha eme (na owu ha) (...) Negroes nke Wanqui nwere ọlaedo ma mara otu esi eji akwa mara mma nke ha na ndi Acanists na-ahia. "
Ihe osise abụọ na-akọwa nkọwa nke Olfet Dapper:
Eze Ashanti na ndị ndụmọdụ ya
Ashanti nwanyi na nwa
Gaa na ntakịrị ntakịrị n'oge gara aga. Ka anyị laghachi na 8 narị afọ, afọ 8oo.
Ebe a bụ ihe anyị mụtara Fabre d'Olivet (1767-1825), a French ọkọ akụkọ ihe mere, banyere mbụ African họpụtara mbụ Moors, onye rutere n'ebe France gburugburu narị afọ nke itoolu. Ọ na-ede, sị:
"Ndị ọcha ahụ ghọtara na oge mbụ, site n'ìhè nke ọhịa ha ọkụ, ndị ikom dị iche na agba dị iche na nke ha. ma ọdịiche a emeghị ha nanị ha. Ndị ikom a kpuchie uwe ndị pụrụ iche, ndị na-ama ụra nke ọma... "(Cf. Akụkọ banyere agbụrụ mmadụ)
Esemokwu nke Moorish
Na narị afọ nke itoolu, ndị Afrika bụ ndị yi uwe pụrụ iche. Ya mere, anyị na-ahụ na nnabata anyị "na-emebi mgbe niile". Ọzọkwa, inwe nkwanye ùgwù, inwe ịke bụ ọdịnala ochie n'etiti ndị Africa. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ikwu na ha nwere mmasị na ihe mara mma, uwe mara mma. Ma ọ dị omimi karịa nke ahụ.
2. Akụkụ ime mmụọ nke ịma mma Africa
Ọ dị mkpa icheta na na Bokoko (nkà na ụzọ ndụ nke ndị Afrịka oge ochie), tupu ịchịchị ahụ, ihe omume niile metụtara akụkụ ime mmụọ, mmekọrịta nke dị nsọ, nke bụ ikwu NZAMBI (CHINEKE). Bokoko na-akụzi na ihe ọ bụla na-amalite site na NZAMBI na ihe nile na-esokwa Ya. Ọ na-akụzikwara anyị na e kere mmadụ n'onyinyo nke Nzambi, Onye Nkwebe mbụ, ya mere, nke a bụ nkọwa onye na-ese ihe na ike. Na n'ihi ihe atụ n'etiti ihe dị n'elu na ihe dị n'okpuru, mmadụ nwere ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ozi ahụ, itinye aka, na-eme ma mụta nwa, n'okpuru ebe a, Mma Chineke.
Ọ ghaghị, dị ka NZAMBI (CHINEKE), mekwara ka ihe dị ebube. N'ihi na okike bụ ihe kachasị mma. Eluigwe na ụwa bụ ihe kachasị mma. Ọ bụ ya mere ndị Afrika ji achọ mma, ịchọ ọdịmma mma, ọdịdị na nkwekọ n'ihe niile ha na-eme.
Anyị nwere ike ịhụ nke a n'ọtụtụ ebe. Dịka ọmụmaatụ ...
Sudanese ije - Foto - Alesk
Nubian Architecture - Photo - lavoutenubienne.org
Kassena Nhazi - Photo - Rita Willaert
Na edozi isi ...
Na uwe ...
Elegance Hamar - Foto - nri
Pụrụ Iche - Photo - Tuul & Bruno
Yoruba Elegance - Foto - https://sarahamla.wordpress.com
Gbasara Igwe - Photo - LisaClarke
Nke a dị mkpa ka ọ bụrụ ihe mara mma na nke dị ọcha, eziokwu ahụ bụ na na Bokoko (nkà na ụzọ ndụ nke ndị Africa oge ochie) a na-ewere ahụ mmadụ dịka ụlọ nsọ. Ụlọ nsọ ebe NZAMBI (CHINEKE). bi. Dịka ọmụmaatụ, na Lingala, ahụ bụ NZOTO.
N'okwu mara mma nke a na-akpọ MUKULU, okwu nke nna ochie Africa, Ya Elima, onye nyocha na onye na-ebido egwú egwú nke Longo, na-akụziri anyị ihe a:
"NZOTO (Inzo) pụtara "ụlọ"; Iji pụtara "anyị, anyị". Ya mere NZOTO (Our Body) nwere ike ịtụgharị dị ka "ụlọ anyị". Gịnị mere "ahụ" anyị, ọ bụghị "ahụ" m? Gini kpatara otutu, obughi ihe di iche? Mara nke ahụ, n'anụ ahụ, ọ bụghị nanị KA (onye m), na-amụkọ ọnụ, ma MOZALI (Onye bụ, CHINEKE). N'ime ahụ, MOZALI na-ahụ onwe ya site n'aka onwe ya, nke na-egosi ya MOZALI. NZOTO (Isi anyị) bụ ụlọ nsọ ebe ike niile na-agbanwe. Ọ na-anọchi anya cosmos niile dị obere"
Ozokwa, n'ihi na NZAMBI (CHINEKE) bi n'ime ahụ anyị, ọ dị mkpa ka ndị nna nna anyị dịrị ọcha na kpuchie ya na uwe mara mma ma mara mma. Ọ bụrụ na Ndị Kraịst, ndị Alakụba, ọ dị mkpa na ụlọ ụka ma ọ bụ ụlọ alakụba dị ọcha, kwadebere nke ọma ma debe ya nke ọma n'ihi na ebe ndị a ka ndị kwere ekwe na-ekwurịta okwu na Chineke; maka ndị Africa oge ochie, ọ dị mkpa na ahụ mmadụ dị ọcha, bụrụ nke ejiji nke ọma ma debe ya dịka ọ bụ n'ụlọ nke NZAMBI (Chineke). Ọ bụ ya mere ha ji eji uwe mara mma na nke pụrụ iche.
Omenala a abughi agburu mba na Maafa (ahia ohu) ma bufee ya rue taa. Ọ bụ ya mere ndị Africa na ndị America na ndị America ji eji ya akpọrọ ihe, na-achọkarị ka ha bụrụ uwe na ejiji. Ọ bụ ụzọ isi asọpụrụ NZAMBI (CHINEKE).
Ọzọkwa, ọ bụghị na ojiji na Swag bụ ndị African-America. Site na ihe m nwere ike ịgụ na ụgbụ, ọ sitere na okwu Bekee "Swagger" nke pụtara "otú e si eji obi ike chee onwe ya n'ụwa na ịke. "
Fọrọ nke nta ka ndị Africa niile "America" ​​mepụta "na mpaghara nka nwere akwụkwọ ozi na ọdịnala Africa. Ha na-esite na ha nwere ọgụgụ isi na creativity Bakoko (nna nna). Inwe ụdị n'ụlọ bụ ihe dị nsọ.
Otú ọ dị, adịghị eme amalgams !!
Na Bokoko (nkà na ụzọ ndụ nke ndị Afrịka oge ochie), ịdị mma na nkecha apụtaghị na ị na-eyi uwe dị oke mma ma na-etu ọnụ na onye ọ bụla 'na-emebi dị ka ọ dịtụbeghị ". N'ihi na ọnụahịa uwe anaghị akọwa onye anyị bụ na ọ dịghị emetụta ọnụọgụgụ anyị. Bokoko na-akụzi na anyị dị elu karịa ndị mmụọ ime mmụọ. otú a, uru anyị bara uru na nke ahụ adịghị mkpa ọnụahịa na ụdị uwe. Ihe dị mkpa, ekwenyere m, bụ ịdị ọcha, ịdị mma na ọdịdị nke anyị na-eyi uwe.
Ọ bụ n'echiche a ka m na-enwe ekele dị ukwuu maka ntinye aka na onye Nleta Nafoor Qa'a. Nke a na-ahazi kwa ọnwa ahịa nke akwa mmanya nke ezigbo mma, nkecha, na ọnụ ọnụahịa. Echere m na ọ bụ ezigbo na Bokoko. Pịa ici ou ici iji hụ ihe ọ na-eme.
N'ikpeazụ, inwe ụdị, "ka ọ bụrụ na ọ ga-emebi dị ka mgbe ọ bụla", dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị nsọ nye ndị Africa na obere ụmụ ha, African-Americans. Ọ bụghị ịhụ ihe onwunwe n'anya kama nkwanye ùgwù maka Nzambi (Chineke) onye anyị na-esonyere anyị ...
Kongo ndi di nma
Ànyị nwere ike ịbụ "maka" ọkụ nke akpụkpọ ahụ?
Withdị n'otu na ndụ niile - Eckhart Tolle (Audio)